युगसम्बाद साप्ताहिक - कुलो भत्काउने– पानी आएन भन्ने ?
Monday, 03.30.2020, 12:54pm (GMT+5.5) Home Contact
कुलो भत्काउने– पानी आएन भन्ने ?
Wednesday, 09.06.2017, 03:41pm (GMT+5.5)
‘देश त बेथितीको पाराकाष्ठामा पुगिसक्यो’ भन्दै एकजनाले भनेका थिए– “यहाँ पण्डित पुरेत पनि कांग्रेस–एमाले र माओवादी बनेका छन् । केहीले नागपञ्चमीमा जनैपूर्णिमा मनाउन लगाए भने केहीले ग्रहण स्रहणले केही नाप्दैन, पूर्णिमाकै दिन जनैपूर्णे मनाउनपर्छ भने । शास्त्रीय नीति नियमलाई पनि बेथितीका विषय बनाइसके” भनेर । हुन पनि ग्रहण त ग्रहण यहाँ त सबै कुरामा राजनीतिक ग्रहण लागेर पो बर्बाद भैसक्यो । समाजका सम्पूर्ण पक्ष आज राजनीतिक स्वार्थका ग्रहणबाट ग्रस्त छन् । आकाशीय ग्रहणको त मोक्षकाल पनि निश्चित हुन्छ, नेपालका राजनीतिक ग्रहणको त मोक्षकाल नै अनिश्चित भयो ।
मर्यादाहीन उत्तेजक भाषण गरेर बडा नेता बनेकाहरु यहाँ छ्यासछ्यास्ती छन । उपद्रो गर्नेहरु नि यहाँ गणतन्त्रवादी नेता बनाइएका छन् । हूल हुल्जत गर्नसके सुझाबुझ र सोच समझ केही नचाहिने रहेछ भन्ने नजीर बसालेका छन् । आफ्नो संस्कार–संस्कृति, निजत्व सबै बिर्सेर बाहिरकै इशारामा चल्नेहरुले आफ्नोपन गुमाइसकेका छन् । आफ्नो माटोमा, आफ्नै खेतबारीमा के फल्छ भन्ने सोच्तै नसोची आयातित निर्वीर्य बीउ विजन रोपिरहेका छन् । फल लाग्नु त कता कता, माटो नै बिगारिसके । संघीय व्यवस्था नेपालमा फलीभूत हुने व्यवस्था नै हैन । सिंहदर्बारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउँछौं भनेर चार हजार गाविस घटाएर ७४४ मा झारेर खुम्च्याइएकाले जनता झन् अप्ठ्यारोमाा परेका छन् । शासनको विकेन्द्रीकरणका नाममा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुनेभएको छ ।
यहाँ प्रतिदिन संविधान संशोधनका कुरा गरेर पनि नपुगेर बाहिर गएर समेत गुहार मागेको सनिन्छ । संविधान राष्ट्रको सम्पत्ति हो । नेतृत्व गर्नेहरुको आनीबानी नसुध्रेसम्म संविधान संशोधन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । ब्रिटेनमा संविधान नै नभए पनि काम चलेको छ । मूल कुरा पद्धति बसाल्न सक्नुपर्दछ । यहाँ पद्धति नै खलबलिएको छ । कुलो भत्काउने, अनि पानी आएन भनेर हुन्छ ? संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवयक पर्छ । तर, यहाँ जुनसुकै पार्टीका नेताले संविधान संशोधन गर्छौ र गराइदिन्छौं भनेको सुनिन्छ । त्यो गलत कुरा हो । हो, संविधान असंशोधनीय हुँदैन, तर संवैधानिक बाटोबाटै जानुपर्छ । जहाँ जसले पायो उसैले संशोधन गर्ने र गराइदिने खोक्रा भाषण र आश्वासन दिएजस्तो होइन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री देशको हुनुपर्नेमा पार्टीको मात्रै भैदिनाले आज राजनीतिक अस्थिरता गहिरिदै गएकोले कतै पद्धतिमै विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको त होइन ? विचारणीय छ ।
दाहालले नै बोली फेरेर यो निर्वाचन प्रणाली (स्थानीय तहका सन्दर्भमा) धनीले मात्र चुनाव लडन र जित्नसक्ने भएकाले अब निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भनेर भाषण गर्न थालेपछि जनताले किन यस्तो व्यवस्था ल्यायौं त ? संविधान र राज्य संचालन व्यवस्था बेला न कुबेला कसैलाई सनक चढ्यो भन्दैमा बदल्ने विषय हो ? यस्ता पीपलपाते नेताको के भर ? भन्न थालेका छन । हुन पनि ७५ जिविस र ४ हजार गाविसको चुनाव गराउन नाम मात्रको खर्चमा पनि सजिलो थियो भने अहिले ७४४ स्थानीय तह बनाउँदा एउटै तहको चुनावमा १०–१५ करोड खर्चले पनि नपुग्ने भयो । यसरी अरु केके उपद्रो गर्ने मनसाय हो कुन्नि ! अहिले निर्वाचनकै परिपाटी बदल्ने कुरा गर्दैछन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मात्र १५ अर्ब खर्च लाग्ने भनिंदैछ । यस प्रकार पछि आउनसक्ने समस्या विचारै नगरी हाउडे तालमा आज एकथोक त भोलि अर्कैथोक गरेर देशको यो हालत पारिसके । अब फेरि अर्को रटना झिकेर के के गर्ने हुन् ! देश त प्रयोग र परीक्षणमै जाने भयो ।
यो देशमाा अहिले ५० जना मन्त्री नै छन् । अझ कति थपिने हुन् । ती सबै निर्देशन दिने मात्रै छन्, काम गर्नेको अनिकालै छ । भए एकाटुक्का अपवाद होेलान् । यी सबै निर्देशनको बाढी बगाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले सहसचिव–प्रजिअ–उपसचिवलाई निर्देशन दिंदै जाँदा अन्त्यमा त्यो निर्देशन साधन सुविधाविहीन पियनसम्म पुगेर टुंगिन्छ । पुछारमा पुग्दासम्म निर्देशन केही गर्नै नपरी थलापर्छ । निर्देशनको शृङ्खला प्रहरीमा पनि पुछारको कन्स्टेबलमाा पुगेर थन्किन्छ । पहिरो होस् वा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका अवस्थाका निर्देशन, प्रकोप आफैं थामिएपछि उद्धारै गर्न नपर्ने गरी काम समाप्त हुँदो रहेछ । भूकम्प सम्बन्धित निर्देशन आज पनि जारी नै छ भने बाढी त भर्खरैको भयो, म्याद बाँकी नै होला । तापनि आशा त गर्नैपर्छ– निर्देशनहरुले गुहार पाउन, निर्देशन दिनेहरुका आँखा खुलुन् ।
आज सबैको ध्यान सत्तामा छ, नेतृत्वमा छैन । नेतृत्व, असल, दह्रो र सक्षम हुनुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान गएको भए आज यो दुर्दशा नै देख्नुपर्ने थिएन । सधैं संक्रमणकाल भनेर सबै पन्छिन खोज्छन् । यो सदाकालको संक्रमण असल नेतृत्वकै अभावको दुष्परिणाम हो भन्ने बुझेनन् वा बुझ पचाए । दह्रो नेताकै कारण समृद्ध मुलुक भेनेजुएला आज कमजोर नेतृत्वले गर्दा ओरालो लागेको आलो दृष्टान्त सबैका अगाडि छ । बुझ्न सके हुन्थ्यो ।
“गोर्खे” मरिरहेछन्, गोर्खाल्याण्ड जलिरहेछ- गोर्खाली “नीरोहरू” ठुमरी खेलिरहेछन्, किन ? (06.28.2017)
लोकभय र लोकलाज पचाएका छद्मभेषी लोकतन्त्रवादी (06.22.2017)